I-COMTAGE YAKHO KWI-ORMANDY - I-Airbnb
I-COMTAGE YAKHO KWI-ORMANDY
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguMarie-Jeanne
Ukhululekile, ukhululekile, uthule ngokugqithisileyo kwaye unomtsalane wamagumbi amabini okulala, ulala 6, 125 sq. M. - yahlaziywa ngokupheleleyo ngo-2014 - i-cottage yakudala yaseNorman "longère", eyakhiwe kwiintyatyambo kunye namadlelo aluhlaza.
Ukufikelela kwabakhubazekileyo, abantwana kunye nezinja zinobubele.
Ukhululekile, ukhululekile, uthule kakhulu kwaye unomtsalane kakhulu amagumbi okulala amabini, alala 6
• I-125 sq. - yahlaziywa ngokupheleleyo ngo-2014-indlu yakudala yaseNorman "longère".
•Embindini wamaphandle anemithi kunye nohlaza, kwimihlaba eyayikade ingakaComtesse de Ségur, umbhali we The Misfortunes of Sophy
•Ibekwe ngaphakathi, kodwa izimele ngokupheleleyo kwindalo yezilwanyana zasendle (akukho zibulali zinambuzane) egcinwe kwi-10 Ha indawo yabucala.
•Yakhiwe kwi-honeysuckle, iirozi ezinyukayo, iihydrangeas kunye neentyatyambo zelavenda, ezijonge eMzantsi, kunelanga imini yonke, i-5000 square metres igadi yabucala onayo isesandleni sakho.
*Ukufikelela okukhubazekileyo: qaphela ukuba yonke indlu iphantsi ngokupheleleyo, ayinazinyuko,
yiloo nto ifikeleleka lula ngesitulo esinamavili, isilawuli sabantwana okanye kubantu abanokuba nayo
ubunzima bokuhamba okanye ukunyuka izinyuko. Qaphela kwakhona ukuba enye yezindlu zangasese kunye ne
ishawari bakhubazekileyo friendly (ishawari inemiqheba emibini eseti eludongeni, isitulo sinokuba
yongezwa, kwaye indlu yangasese ibekwe kwinqanaba eliphakanyisiweyo).
Phambi kwendlu, iimitha ezi-3 ezinkulu zelitye lelitye elipinki nelingwevu lihamba nobude bendlu yonke, kunye netafile yentsimbi eyakhiwe ngokucokisekileyo kunye nezitulo ezi-6 ezihambelanayo, ukonwabela ukutya okanye iziselo ngaphandle. Iambrela enkulu yohlobo lwaselwandle kunye nezitulo zeplanga ezi-4 (ezinemiqamelo) nazo zikwabonelelwa.
Ngaphaya kwethafa kukho ingca eneentyatyambo zasendle ezizikwemitha ezingama-3000, ezele ngamathontsi ekhephu entwasahlobo, iidaisies nakwixesha lonyaka elinencasa yeedandelion, igadi yeapile nemithi yamacherry, umthi wehazel kwikona yasekunene kunye nothuthu olumhlophe olude eluthangweni, olulungisiweyo. ibhower evala igadi. Umntu unokujonga ngasemva kwimithi emide yendawo enkulu kunye negadi yemifuno ephilayo ekufuphi (undwendwelo ngesicelo).
Ujongene nomva wendlu (kwicala lasekhitshini), kukho ishedi yakudala kakhulu, esetyenziselwa kuphela ukugcina izixhobo, akukho bamelwane bathe ngqo, kunye nengca yasendle ende nenkulu (imalunga ne-3000 sq yeemitha) ebaleka ukuya kuvala. iindonga zelifa. Apha uya kufumana itafile yethu ye-ping-pong, ujingi ukukhwela intambo yabantwana, kunye nesithuba esingaphezulu kwesaneleyo ukonwabela i-badminton yethu okanye iseti yeecroquet.
Indawo yonke yindalo yabucala egcina indalo yasendle iminyaka engaphezulu kwama-40 ngoku kwaye yamkela zonke iintlobo zeentaka zalapha ekhaya, iintaka, i-goldfinch, ipine siskin, i-robin redbreast, i-woodpeckers okanye i-blue chickadees ngumzekelo omnye wabaninzi ababonisa apha: ukuntyiloza ekuseni ukuya. kulindeleke! Kwaye ngokuqinisekileyo izilwanyana ezininzi ezincinci zasendle zihlala emhlabeni wethu. Ukuba unethamsanqa elaneleyo ngorhatya ungasibona isikhova sethu esikhulu, ubone impungutye ethile ibaleka okanye uve isiphithiphithi sehedgehogs ezinentloni kunye nembila eyimfihlo.
Igadi ifanelekile kuyo yonke imidlalo yangaphandle, siya kukuvuyela ukukuboleka izinto zokudlala zangaphandle zabantwana, kunye "nedama lokuqubha" losana (i-100 cm enkulu / 40 cm ubunzulu obungqukuva ibhesi). Injongo yethu yebhola ekhatywayo kunye netafile yethu ye-ping-pong sele ikwingca, kwaye uya kufumana endlwini yethu i-croquet, i-pétanque kunye ne-badminton iseti.
Umgama wokuhamba ngeAube/ ngebhayisekile (iikhilomitha ezi-3), ilali ebonelela ngeenkonzo ezifanelekileyo kunye neevenkile ezisisiseko: iposi, isikolo, ikhemesti, ugqirha, i-pub, ivenkile encinci, ivenkile yepastry, iinkundla zentenetya, imidlalo kunye nebala lokudlala labantwana.
I-L'Aigle 10' drive away (8km), idolophu encinci yelizwe enazo zonke izinto eziluncedo: imakethi enkulu yomfama weveki nganye (rhoqo ngoLwesibini), ii-pubs ezininzi kunye neendawo zokutyela, abalungisi beenwele, iivenkile zamaphephandaba, igrosari ephilayo, ipizzeria, ichibi lokuqubha, i-bowling, imovie yethiyetha. , iivenkile ezinkulu, izikolo kunye nebala lokudlala labantwana, iivenkile zemidlalo kunye neebhayisekile, isibhedlele, oogqirha, ugqirha wezilwanyana njlnjl...
Ngokwemfuno yokhenketho lwegadi yethu yemifuno ekhule ngokupheleleyo kunye ne-organic 300 sq yemitha yegadi ingacwangciswa.
Ubuninzi bemidlalo eyahlukeneyo, yenkcubeko okanye ye-gastronomic imisebenzi inokulungiswa ngokulula, kufutshane (ubuninzi be-20 'drive) ungayonwabela:
Ichibi elishushu likaMasipala, i-10' drive:
esinye sezona zilayidi zide zaseYurophu, iphuli yangaphakathi nangaphandle, i-jacuzzi, i-sauna, i-hamam, i-aqua gym, imisebenzi eyahlukeneyo - kuquka iiklasi zokuqubha usana.
Ichibi langaphandle le-Organic (i-chlorine kunye nekhemikhali yasimahla, inkqubo yokuhluza izityalo zasemanzini), ngasemlanjeni, imisebenzi eyahlukeneyo.
•Iklabhu ye-poney, ukukhwela ihashe okanye ukuhamba
•Ukutyelelwa kweefama zamahashe
•Ikhosi yeGalufa enemingxuma emi-9 (30’ drive)
•Imyuziyam yeComtesse de Ségur, (umbhali we The Misfortunes of Sophy), owayehlala kule lali ukusuka ngo-1821 ukuya ku-1872.
•La Dame aux Camelias (Camille, ngu-Alexandre Dumas) ikhaya lokuzalwa kunye neMyuziyam
•Imyuziyam kaJuni 1944 e-l'Aigle
•I-Abbey eyaziwayo yaseLa Trappe kunye nehlathi elihle laseMoulin-La-Marche
•Oyena mntu uphumelele imbasa yebrioche yesiFrentshi kwivenkile yepastry
•I-antique Foundry (1500) ebekwe eAube ngasemlanjeni
•Imyuziyam yeMeteorite, malunga naleyo yawa ngo-l'Aigle ngomhla wama-26 ka-Epreli 1803
•Haras du Pin, iziko lesizwe lamahashe, ilifa lasebukhosini
• Le Bourg Saint Leonard XVII ngenkulungwane inqaba kunye nepaki
Kule ndawo uya kufumana iindawo ezininzi zezikhumbuzo zedabi laseNormandy, iigadi ezininzi ezimangalisayo kunye namahlathi, iicawe ezininzi okanye ii-abbeys, kwaye ngokuqinisekileyo zininzi iindawo ezinomdla, ngelixa kufuneka unqwenele ukugxila kwigadi yeziqhamo kunye ne-gastronomy yendawo, okanye mhlawumbi kwi-gallic. ii-relics okanye amakhaya ababhali abadumileyo, ngokuqinisekileyo uya kufumana okuninzi okundwendwela, kwaye iLa Mésange Bleue ngokuqinisekileyo sisiqalo esihle sokufumanisa iNormandy.
Nalu uluhlu olufutshane lwezimvo, zonke zibekwe phakathi kwe-40' kunye neyure yokuqhuba:
•Camembert, ikhaya lesonka samasi esidumileyo
•Ihlathi laseBellême: 2400 hektare yenye yezona hlathi zintle zaseFransi
•CERZA kunye neepaki zezilwanyana zasendle zaseThoiry
• Iikhareji, izitena ezimangalisayo kunye nenqaba yegranite eyakhiwe ngohlobo lwe-XIV ukuya kwinkulungwane ye-XVII
•I-Chateau d'O, inqaba ebukekayo ye-XV-XVII, i-orenji kunye ne-antique moat.
• I-Chateau de Rânes, inqaba yenkulungwane ye-XV kunye nentolongo, imyuziyam yangaphambili
•Chateau du Tertre, Louis XIII eqhelekileyo yezakhiwo,
•Ikhosi yeGalufa enemingxuma eyi-18 eBellême
•9-hole Golf course kufutshane Verneuil
•Imyuziyam yeArboretum kunye neleyisi yaseAlençon
•Isikhumbuzo saseMont Ormel
Uhambo lwemini lukwalula ukucwangcisa kunye needolophu ezithandekayo eziselunxwemeni zaseDeauville, eTrouville, okanye eHonfleur, ukuya kwiilwandle ezidumileyo zokumisa, ukuya kwigadi kaMonet, okanye kwitapestry yaseBayeux.
Umbuki zindwendwe ngu- Marie-Jeanne
Traductrice, éditrice et rédactrice free…
Kuzakuhlala kukho umntu endlini esecaleni kwakho ozakunceda ngokufika kwakho nokunye.
Usapho lwethu luhlala kule ndawo iminyaka engaphezu kwama-40 ngoku, kwaye siya kukuvuyela ukukunika lonke uncedo oluyimfuneko kunye nolwazi ukwenza ukuhlala kwakho kukhunjulwe.
Kuthethwa isiNgesi, isiTaliyane nesiFrentshi
Usapho lwethu luhlala kule ndawo iminyaka engaphezu kwama-40 ngoku, kwaye siya kuku…